Shiinaha shaati polyester qalalan oo deg deg ah oo loogu talagalay xayaysiinta marathon-ka iyo ololaha doorashada oo loo habeeyay soo saarayaasha taangiyada ugu sarreeya iyo alaab-qeybiyeyaasha | RE-HUO
Shaati & dushooda
Dharka Kubbadda Koleyga
Saraawiil & gaagaaban
Dharka Kubbadda Cagta
Tababarka Bibs Dadka Waaweyn iyo Ki ...
Cunugga Jerseys Scrimmage Trai ...
Dadka waaweyn - Dhalinta Scrimma ...
Shaatiyada polyester qalalan oo jumlo ah oo loogu talagalay xayaysiinta marathon-ka iyo ololaha doorashada ee loo habeeyay taangiga sublimation sare
Nooca alaabta: Taangiga Sublimation-ka sare
Waxyaabaha: Doorashooyin dhar badan
Noocyo: RE-HUO ama OEM
Farsamada: Daabacaadda Sublimation
Feature: Neefsasho, Cabbir Dheeraad ah, Raaxo leh, Eco-friendly
Midabka: Loo habeeyay iyadoo loo eegayo qaabkaaga
Cabir: XS / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4xL / 5XL
Dharka sare ee taangiga ayaa ku habboon isboorti, xayeysiin, maaratoon, iyo nashaadaad kooxeed.
1.In dharka keydka ah.
Dharka keydka, MOQ-da waa 50 gogo 'funaanad ah dhar kasta, waxaadna dooran kartaa cabirro badan.
Haddii waxyaabaha kor ku xusan aysan haysan dharka aad rabto, waxaan sidoo kale leenahay adeegga dharka loo habeeyay, waxaan u habeyn karnaa dharka si waafaqsan shuruudahaaga, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad bixiso saamiga dharka, Bixi, MOQ ee loogu talagalay dharka khaaska ah waa 2000 taangiga sare.
Kani waa jaantuska cabbirka ee Mareykanka, waxaan sidoo kale bixinnaa adeegyo cabbir ahaan loo habeeyay, waad noo soo diri kartaa shaxdaada cabbirka ama waxaad noo soo diri kartaa shaati, naqshadeeyeheenna ayaa u qaabeyn doona sida aad u baahan tahay.
Waxaan sidoo kale haynaa adeegyadan soo socda
Waxaan leenahay daabacaadda xarka xarka ah, daabacaadda sublimation dheeha, daabacaadda DGT, daabac, daabacaadda wareejinta kuleylka, daabacaadda noctilucent, daabacaadda shaabad kulul ee dahabka / dahabka, daabacaadda qaybta, daabacaadda biyaha.
Waxaad dooran kartaa hal ama in kabadan oo habab daabacaad ah si aad uga dhigto taangigaaga dusha sare mid moodada badan.
Waxaad noo soo dirtaa nashqadahaaga waxaanuna u daabici doonnaa si waafaqsan dalabkaaga, Haddii aadan aqoon sida loo sameeyo dusha taangiga
naqshadeynta, waxaad noo soo diri kartaa astaantaada ama fikraddaada, oo naqshadeeyeheenna ayaa kuu dhameystiri kara naqshadda adiga.
Daabacaadda sublimation, Waxaan u astaysto si waafaqsan midabka Pantone ee aad bixiso.
Waxaan bixinaa adeegsi summad iyo adeeg tag ah, samaynta taangiga dusha sare leh sumaddaada.
Waxaan soo dhaweyneynaa weydiimaha ka imanaya adduunka oo dhan, amarro aad u yar iyo amarro aad u weyni ma jiraan.
Hore: Calaamadda Gaarka ah ee Jumlada ah Daabac Shirt Polo Gaaban oo Degdeg ah
Haweenka jumlada Fashion Custom Logo daabac Shirt ...
Calaamadda Gaarka ah ee Jumlada ah Daabac Shirt Polo Gaaban oo Degdeg ah
Tayo sare leh jumlada gacmo dheer t shir ...
jaakad nabadgelyada aragtida ah oo ka tarjumaya ...
Kooxda sublimation isboortiga tayo fiican leh ...
Golf Xidho funaanada ragga Lab Polo Shirt Sh ...
Hot Fashion Co., Ltd. oo la aasaasay sanadkii 2003 waa shirkad kaladuwan oo isku dhafan naqshadeynta, horumarka iyo wax soo saarka dhoofinta iyo hawlgalka ganacsiga e-commerce. Shirkaddu waxay ku taal Nanchang City, Gobolka Jiangxi, Shiinaha oo leh shabakad ballaadhan oo isku xira gaadiidka. Waxay leedahay 8250 mitir murabac oo saldhig wax soo saar casri ah iyo 300 oo shaqaale ah. Fashion kulul ayaa caan ku ah dhanka dharka isboortiga ee Shiinaha. Haddana wax soo saarkoodu si guul leh ayuu suuqa ugu aasaasay Mareykanka Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Japan, Brazil iyo Midowga Yurub.
Hot Fashion Co.Ltd. oo la aasaasay sanadkii 2003, taas oo ah shirkad kaladuwan oo mideysa naqshadeynta, horumarka, wax soo saarka, ganacsiga dhoofinta, ganacsiga iyo ganacsiga. Shirkadda ku taal Nanchang City oo leh gaadiid ku habboon. Waxay leedahay 8250 mitir murabac oo saldhig wax soo saar casri ah iyo 300 oo shaqaale ah.